Novelty: kuenzanisa zvigadzirwa zvedu uyegovera maonero ako! - Kitchenware.com
Novelty: kuenzanisa zvigadzirwa zvedu uyegovera maonero ako!
27 September, 2017 • mutengi ona • nhau • chigadzirwa chemagetsi • utsva • Wongororo
Chimwe chinhu chakanaka vhiki ino!
Tinoziva kuti vatengi vanovimba nevatengi zvikuru kupfuura vatengesi ivo pachavo!
Saka kana mutengesi akuudza iwe, "chigadzirwa ichi ndicho chakanakisisa", vashomanana venyu vachagutsikana.
Kune rumwe rutivi kana mumwe mutengi akuudza iwe "Ndakaiongorora, ndicho chakanakisisa!", Ikoko asi kusahadzika kuchasimudzirwa uye kuchava nechiitiko chinoshamisa pane rekodhi yemari!
Izvi zvinonzi hutano hwehupfumi. Iyi nheyo yave yakashandiswa kubva pakutanga kwekanguva uye iri munhu :-)
Mukuwedzera, kugadziriswa kwevatengi kunogona kubvumira mutengesi kuvandudza michina kana mabasa, zvichida kubvisa chigadzirwa chekutengeswa kana isingagutsikane nevatengi varo ...
Mufananidzo : 70% vatengi vanoona maziso kana mapeti asati apedzisa kutenga.
Nokuda kwezvikonzero izvi zvose takagadzira chiyero uye chirongwa chezvigadzirwa zvemiti yedu.
Saka kana iwe uchitarisa peji redu rekugara kana muCollect, iwe uchakwanisa kuona pasi pezvigadzirwa zvemhando imwe neimwe nyenyeredzi duku (dzakakwana kana zvatove zvichinyora, zvisingabatsiri kana zvichiri zvinyorwa).
Uye kana iwe ukanyora pane chigadzirwa chemiti, uchakwanisa kuona tsanangudzo dzezvinyorwa uye zvigadzirwa zvevatengi (Kuteerera kweVatengi).
Ini zvino ndine BASA rakakura kukubvunza....
Kana iwe wakatova nemukana wekuedza zvimwe zvezvigadzirwa zvedu (uye kunyange iwe usina kutenga kwavari nekukanganisa ...), iwe ungatipa maminetsi mashomanana kuti tisiye nhete uye chiziviso kune mumwe nomumwe wedu? Izvi zvinokufadza here?
Pakutanga zvaizobatsira vanhu vomunharaunda, sezvataitsanangura iyo ichabvumira vatengi kuti vawane pfungwa uye vasarudze, rwechipiri tichazosimudzira uye kutibvumira kusaisa zvinhu zvakanyanya kwenguva yakareba pasina chiziviso (iyo chakanga chisina kusimba hachisi icho ?!).
Un KUBVA zvikuru kwauri nokuda kwekubatsira kwako!
NYIKA le 28 September, 2017
Kunyatsogutsikana nekutenga kwangu 2 1 XNUMX Kugunura Keni Kishi Yakisi, rinonyatsoshanda uye rinondidzivirira kubva pakucheka.
Ndinokurudzira iyi site, iniwo ndichaita zvimwe zvekutenga
hi I kare kutenga akawanda kicheni Ezvemutauro ;;; J; kupupura kuti ndikawana panzvimbo iyi zvigadzirwa J; zvandinoda kubika ... I nokukurumidza kugadzira madenderedzwa ane Stainless simbi kugadzirira zvakanaka kugamuchira vaenzi dzangu ... I Prosperity GREAT anoda IYI YEPAINDANETI ... kukuona !!!!